Ungayithola Kanjani i-IPTV yamahhala (2020) - Izinsizakalo Zokusakaza zamahhala nezinhlelo zokusebenza - Ezokuzijabulisa
I-Cable ne-Sattelite TV iba uhlelo lokuzijabulisa olwedlule. Ubuchwepheshe besimanje buholele ekwethulweni kwe-IPTV, eyaziwa nangokuthi i-Internet Protocol Television. Ngamazwi alula, isebenzisa ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi ukukulethela ukunethezeka kwethelevishini.
Ngaphezu kwalokho, kuya ngokuhambisana kwepulatifomu ye-IPTV, ungayisebenzisa cishe kunoma iyiphi idivayisi. Kuza nezinsizakalo eziningi nokuhlangenwe nakho komuntu siqu. Izinhlelo zokusebenza ezidumile njenge-Hotstar, Hulu , I-Disney + , INetflix , futhi Amavidiyo amakhulu yizibonelo ezivelele ze-IPTV.
Kodwa-ke, i-IPTV ayigcini nje ngamavidiyo afunwayo. Kukhona nezinye izinsizakalo, futhi. Ngabe ufuna ukufunda ukuthi ungayithola kanjani i-Free IPTV? Ngemuva kwalokho le ndatshana ingakusiza ukufezekise lokho, ngokusemthethweni. Akunasidingo sokuthi wehle indlela yokuphanga ukuze ujabulele ithelevishini kudivayisi yakho oyithandayo.
Qonda Uhlobo lwe-IPTV: Izici
Ngaphambi kokuba uqale ukuthola i-IPTV yamahhala, udinga ukuqonda ifayili le- izinhlobo ezahlukahlukene zezinsizakalo ze-IPTV ayatholakala ezweni lanamuhla elithuthuke ngokwamanani
1. Ividiyo Ekufunweni
Lezi yizinsizakalo ze-IPTV ezicishe zifane nezibonelo ezinikezwe ngaphezulu zeHotstar neNetflix. Yilapho ungakhetha khona futhi sakaza noma iluphi uchungechunge lwe-TV noma i-movie noma kunini lapho ufuna khona. Kukulethela lula ukuwalanda noma ukuwamisa okwesikhashana ukuze uqhubeke futhi emuva kwesikhathi.
2. Ithelevishini Ekufuneni
Yilapho uhlelo lokusebenza lweHulu luyisibonelo esihle. Ikulethela iqoqo leziteshi ze-TV eziningi ezitholakala kukhebuli noma ku-Sattelite TV. Lezi ziteshi zitholakala ngqo ku-App, futhi ungafinyelela kuzo ngesikhathi sangempela.
Ngakho-ke, ungabuka okuqukethwe okusakazwa yiziteshi. Kubandakanya izikhangiso abazokhombisa zona. Izindaba ezibukhoma nezemidlalo nazo ziyingxenye yalesi sethi. Noma kunjalo, izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zinobudlelwano obuhlukile futhi zisebenzelana neziteshi. Ngakho-ke ukutholakala kweziteshi kungahluka.
3. Ithelevishini ebukhoma
Le ithelevishini ebukhoma ngokuphelele efanelekile ukubukela okwenzekayo njengamanje. Imvamisa uhlelo lokukhokha ngokubuka olukuvumela ukuthi ukhokhe ukubuka umcimbi othile. Isibonelo, i-ESPS + inikeza ukusakazwa bukhoma kwe-Fight Events ngenketho yokubuka ngakunye ngokukhokha. Kodwa-ke, abanye abahlinzeki bezinsizakalo basasebenza ukuletha mahhala ithelevishini ebukhoma.
4. Ukusakaza Okuhleliwe
Lokhu kufana nokufunwa kwevidiyo, kepha uthola ukufinyelela ohlelweni lokusakaza. Amanye ama-IPTV anesikhathi esithile lapho ezosakaza khona uhlelo noma isiteshi esithile. Ungabhalisela futhi uhlale phansi ukuze bababuke.
5. Ithelevishini Eshintshwa Isikhathi
Le yinkonzo lapho uzothola khona iningi lezinhlelo zokusebenza zamahhala ze-IPTV noma amapulatifomu. Ithelevishini eshintshwa isikhathi ivumela umhlinzeki we-IPTV ukuthi akhombise i-TV ngemuva kwamahora ayi-12, 24, noma ama-48 wegebe. Ngakho-ke, okuqukethwe ongakubuka sekwephuze kancane futhi akubukhoma noma kusha. Lokhu ngokuvamile yilokho okunikezwa mahhala yi-IPTV. Namanje ifana nethelevishini ejwayelekile. Unokusakaza okubambezelekile.
Ubungxiwankulu buphezulu kakhulu ngokwethulwa kwezinhlelo zokusebenza ze-premium nezinsizakalo ze-IPTV. Kubukeka cishe kungenakwenzeka ukuthi ujabulele izinsiza zamahhala ze-IPTV. Izindaba ezimnandi! Usengathola i-IPTV yamahhala. Nazi zonke izindlela ongazibukela i-IPTV mahhala ngokusemthethweni:
Ukulanda Izinhlelo Zamahhala ze-IPTV:
Izinkampani ezingenakubalwa nabahlinzeki bezinsizakalo basebenzela ukutshala imali ekunikezeni uhlelo lokusebenza lwe-IPTV. Ngakho-ke, ungalanda lezi zinhlelo zokusebenza kumadivayisi abawasekelayo. Yebo, kungadinga ukuthi uhlole ukuhambisana kwazo.
Ezinye izinhlelo zokusebenza kungenzeka zingahambisani nazo zonke izingxenyekazi. Lapho usuqonda ukuthi ziyahambisana, ungazithenga. Kulula kuwe ukuthola iTV yamahhala ngalezi. Noma kunjalo, okuqukethwe kuzo kungaba okwangempela noma ukukhiqizwa okuthile kwesabelomali esiphansi. Ngakho-ke, awukwazi ukulindela okuningi.
Ezinye izinhlelo zokusebenza zingasebenzisana nezinye iziteshi ze-TV nezinkampani ukukulethela okuqukethwe okukhethekile. Ngakho-ke leyo yindlela okufanele uhambe ngayo.
Kungaba ngcono kakhulu uma usebenzisa i- I-VPN nalaba bahlinzeki benkonzo yamahhala. Isikhathi esiningi, bangaba nezikhangiso ezivela eceleni namakhukhi angaphazamisa umuzwa wakho. Abanye bangazama ukuqoqa idatha yakho efana nendawo futhi ngokuzenzekelayo.
Ukusebenzisa i-VPN kuzonciphisa kakhulu amandla ezinsongo zokuphepha ezinjalo. Sebenzisa i-VPN njalo. Kusemthethweni ngokuphelele futhi kuyisibusiso kubasebenzisi be-intanethi.
Ukwenza kusebenze inguqulo yesivivinyo:
Uma ufuna ukujabulela okuqukethwe kwe-premium-grade nezinsizakalo, kufaka phakathi iziteshi ezidume kakhulu, ungahle uthande ukuzama inguqulo yesilingo yezinhlelo zokusebenza. Lezi zinguqulo zesilingo ziyatholakala kuzinhlelo zokusebenza ezidinga okubhaliselwe. Noma kunjalo, ezinye izinhlelo zokusebenza zithanda INetflix kungenzeka inganikeli ngesilingo inguqulo.
Lokho ukuphela komkhawulo kulokho. Imvamisa, izinhlobo zezilingo zihlala noma kuphi phakathi kwezinsuku eziyisikhombisa ziye enyangeni eyodwa. Ngakho-ke, kuzodingeka uhlole ubude besilingo. Khumbula ukuthi kuzodingeka unikeze inketho yokukhokha.
Uma usuzophetha inguqulo yesilingo, kungcono uye enkethweni yokubhalisile bese uyakhansela. Cishe wonke umhlinzeki wesevisi unendlela ehlukile kepha eqonde ngqo yokwenza isilingo sisebenze. Kodwa-ke, cishe bonke basebenza ngenqubo yokuzivuselela ngemuva kokulingwa. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uyayikhansela.
Thola Izilingo Eziningi:
Ngenye indlela, uma unezinombolo eziningi nama-ID, ungajabulela izilingo ezahlukahlukene. Isibonelo, ukusebenzisa idivayisi yakho kanye bese usebenzisa idivayisi kamama noma kababa wakho ukuthola okunye ukubhalisa kwesilingo njalonjalo. Abanye abahlinzeki bezinsizakalo baphinde bakhiphe izinhlinzeko zesilingo ngezikhathi ezithile ukuze ukwazi ukuzihlola.
Kodwa-ke, izilingo eziningi zisho ukuthi kuzofanela ugcine ithrekhi yamadethi abo ukuze uzikhiphe ohlwini ngesikhathi. Kwesinye isikhathi, lokhu akusebenzi njengoba kulula ukulahlekelwa ithrekhi yesikhathi maqondana nokubhaliselwe kwezinhlelo zokusebenza. Ngakho-ke, uzogcina ukhokhiswa insizakalo. Ngokuqinisekile bekungeke kusebenze kudivayisi efanayo othola kuyo izilingo zangaphambilini, njengoba kune-ID yedivayisi ethile izinhlelo zokusebenza ezibhalisa kuyo nokubhalisile kwesilingo.
1Q. Ngingalanda Ngikuphi Izinhlelo Zamahhala ze-IPTV?
Iminyaka:Ngenxa yokuphepha maqondana nemininingwane yakho, ukugenca nezinye izinkinga, kungcono ukulanda izinhlelo zokusebenza kumthombo othembekile. Ungathola izinhlelo zokusebenza eziningi ku-PlayStore yamabhizinisi ahlukahlukene.
Ungalandi izinhlelo zokusebenza kumawebhusayithi ahlukahlukene angagunyaziwe ngoba lokho kukubeka ezinsongweni zokuphepha. Amafayela e-APK awanikezayo kungenzeka angabi ngeqiniso. Ezinye izinhlelo zokusebenza zisebenzisa imininingwane yakho ukuzithengisela umuntu wesithathu.
2Q. Ngazi Kanjani Uma IPTV Iqiniso?
Iminyaka:Kuyiqiniso ukuthi ngisho nezitolo zokudlala akuphephile ngokuphelele kusongo olungaba khona lwezinhlelo zokusebenza zomgunyathi. Kungcono ukubheka noma isiphi isitifiketi noma ukuqinisekiswa kohlelo lokusebenza. Uma kungekho, ungabheka ukubuyekezwa komsebenzisi. Kulula kakhulu kuwe ukwahlulela ubuqiniso bohlelo lokusebenza ngokufunda izibuyekezo ezinikezwe abanye abasebenzisi.
3Q. Ingabe Bukhona Ubungozi Bokubheja Ngezinhlelo Zokusebenza ze-IPTV?
Iminyaka:Kunethuba lokuthi izinhlelo zokusebenza ze-IPTV ozifakayo kungenzeka zikuphangise okuqukethwe. Kodwa-ke, iningi lalezi zikhathi, uma ulilande kumthombo othembekile, njenge-Google Play Isitolo, awunaphutha. Akekho ongakusola noma akusole ngokugqekeza.
Kodwa-ke, uma uyisebenzisa kusuka kumthombo ongaziwa noma kuwebhusayithi, ingahle ibukeke ngamabomu, futhi ungakhokhiselwa ubugebengu bokuphanga.
4Q. Yini Engiyidingayo Uma Ngingenayo I-Smart TV Ye-IPTV?
Iminyaka:Ungasebenzisa abahlinzeki bezinsizakalo abadumile njenge-FireStick TV ye-Amazon noma Unyaka ukushintsha i-TV yakho yakudala ibe yi-smart TV uma kunembobo ye-HDMI etholakala ku-TV yakho. Kodwa-ke, amathelevishini amaningi amadala kungenzeka angabi nayo imbobo ye-HDMI yokuxhuma.
Ngalokho, ungathenga i-adaptha eyengeziwe, eyaziwa nangokuthi iyidlulisi, exhuma ku-RCA ye-TV yakho futhi ikunikeze imbobo ye-HDMI ye-TV. Ngalesi, ungaxhuma I-Firestick TV futhi okunjalo ukujabulela ukuzijabulisa kwe-smart TV. Ngenye indlela, ezinye izinkampani zinikela ngebhokisi lokusetha ukwenza i-TV yakho ibe yi-IPTV.
5Q. Ungayisebenzisa i-IPTV Kwamanye Amadivayisi?
Iminyaka:Ukuncintisana phakathi kwezinkampani kubenze ukuthi baqhamuke nokuhambisana okungcono kwezinhlelo zokusebenza. Ngakho-ke, ungasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zokusakaza kanye ne-IPTV kuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Namuhla, iningi lama-IPTV lihambisana nama-Smartphones, ama-Tablets, ngisho namaGaming Consoles. Kodwa-ke, kungadingeka ukuthi uhlole ukuhambisana kohlelo lokusebenza ukuqinisekisa ukuthi isekela i-OS noma idivayisi yakho.
I-IPTV ngokungangabazeki ubuchwepheshe bokuguqula izinguquko. Ikulethela ukuzijabulisa okungenakuphazanyiswa ngejubane elikhulu uma nje une-intanethi ehloniphekile. Awudingi isivinini esikhulu, noma, njengoba isebenza kahle ngokuxhumeka okujwayelekile. Ezindaweni lapho ungahle ungatholi khona isignali ye-TV yekhebula, kuyisinqumo esihle.
Lezi izindlela kuphela ezaziwayo zokukusiza ukuthi uthole i-IPTV yamahhala yokuzijabulisa okungapheli. Sethemba ukuthi ungathola okuthile okufanele isikhathi sakho ngezinhlelo zokusebenza eziningi zamahhala ezitholakala online. Ngakho-ke yisikhathi sokuba uvakashele esitolo sakho sohlelo lokusebenza futhi uhlole abahlinzeki be-IPTV bamahhala.
Ngalokho okushiwoyo, jabulela i-IPTV yakho yamahhala!
Izindlela ezihamba phambili ze-Cable TV 2020
bukela i-tv online mahhala ngaphandle kokubhalisa
ucwaningo lwamakhadi wesipho se-amazon
ifayela le-pubg 1 lehlulekile ukuqinisekisa
indlela yokubuka imibukiso ye-tv mahhala ku-inthanethi
ama-hulu plus amadili abafundi
amakhodi wekhadi lamahhala we-psn generator